Nagu saabsan - Xidhmada King Automatic Equipment Co., Ltd.
Xidhmada King Automatic Equipment Co., Ltd.
Iimayl: jade@packingconveyor.com Taleefan: +86-13927222182
Pack King Automatic Equipment Co., Ltd. Waa soo -saaraha ugu wax -ku -oolka badan uguna horumarsan ee Shiinaha, oo leh in ka badan 15 sano.
Teknolojiyadda R iyo D ee warshadaha xirxirida: Kooxaheena injineerada xirfadda leh, farsamayaqaannada iyo shaqaalaha ayaa ku siin kara mashaariic iyo wax soo saar ku qanacsan.
Pack King Automatic Equipment Co., Ltd. waa soo -saaraha wax -ku -oolka ah oo horumarsan ee gudbiyaha Shiinaha, oo leh khibrad ka badan 15 sano R&D xagga warshadaha xirxirida. Waxaan ku suganahay magaalada Foshan ee Gobolka Guangdong waxaana badeecadeena laga iibiyay dalal badan oo dibedda ah. Badeecadaheena ugu weyni waa gudbiyaha si otomaatig ah loo fahmay iyo nidaamka baakadaha, sida wiishashka Hal baaldi, conveyors ku habboon, conveyor baaldi u janjeersaday, gudbiyaha badeecadda, conveyors suunka Horizontal, conveyor baaquli u janjeersaday, Z nooca wiishka, Feeders gariir, Meelaha shaqada, miisaska Rotary iyo mashiinka xirxirida . Kooxaheena injineerada xirfadda leh, farsamayaqaannada iyo shaqaalaha ayaa ku siin kara mashaariic iyo badeecado ku qanacsan.
A 10000 m2 meel bannaan iyo khadka wax -soo -saarka oo leh 100 shaqaale si fiican loo tababbaray, waxaan awoodnaa inaan soo saarno 3 0 0 oo xamuul ah bishiiba. Waxaan leenahay hufnaan, xarun wax-soo-saarka teknolojiyadda sare ee Shiinaha. Hadafkayagu waa inaan hagaajino dalabka alaabtayada, qalabka la qabsan karo iyo wax soo saarka tayada leh.
Dhammaan mashiinnadayada waa la naqshadeyn karaa oo si gaar ah loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha saxda ah ee macaamiisha. Waxaan nafteena u hurnaa bixinta xalalka baakadaha si loo daboolo baahiyaha macmiilka.
Qalabkayaga ayaa si weyn loogu adeegsadaa dhinaca cuntada, kiimikooyinka, daawooyinka, wax soo saarka beeraha iyo waxsoosaarka warshadaha. Waxaa nalooga mahadcelinayaa inaan la shaqeyno soo -saareyaasha xirmada caalamiga ah iyo qeybiyeyaasha ganacsiga ee la xiriira.
• 24 saacadood gudahood waxaan ku gaarsiin karnaa qalabka moodeelka caadiga ah.
• Waxaan ku siin karnaa dhammaystirka mashruuca xirxirida lacag la'aan.
• Waxaan soo saari karnaa mishiinka gudbiyaha oo kuwa kale aysan sameyn karin.
• In ka badan 15 sano oo waayo -aragnimo tikniyoolajiyadeed R&D ah xagga xirxirida iyo warshadaha gaadiidka.
• Hal -abuurnimada tiknoolajiyadda waxaana naga go'an inaan xallino dhibcaha xanuunka ee macaamiisha iyo warshadaha.
•Tayada ayaa sarreysa oo deggan. Waxaan xakameynaa wax soo saarka laga soo bilaabo alaabta ceeriin ilaa laynka qalabka oo dhan.
• Badeecadayadu inta badan waa mashiinno aan caadi ahayn, si ay u gaaraan faa'iidooyin wax-soo-saar oo tamar-badbaadin u leh macaamiisheena.
Socodka geedi socodka
Farsama yaqaanka xirfadlayaasha ah ayaa aad ugu dadaalaya sidii ay u habayn lahaayeen alaabta aad rabto.
Waxaad dooran kartaa habab kala duwan oo saadka iyo qaybinta ah, waxaanan u samayn doonaa tallaabooyin ilaalin iyo rakibitaan dhinacyo badan leh oo loogu talagalay alaabtaada inta lagu guda jiro gaadiidka.
Waa kuwee badeecada aad u xiisaynayso?
Wuxuu ku siin doonaa adeeg tayo leh
hadda nala soo xiriir !!
Alaabta Kulul - Khariidadda bogga
Wareega Suunka Gubashada, Wiishashka Cuntada, Gudbinta Silsiladda, Z wiishka baaldi, Wiishka baaldiga ee rogaya, Xamuulka Fayadhowrka,